Ciidamo Tababar kusoo Qaatay Qardho oo ka Qayb-qaadanaya Sugida Amniga Bosaso – Radio Daljir
Ciidamo Tababar kusoo Qaatay Qardho oo ka Qayb-qaadanaya Sugida Amniga Bosaso
Maajo 11, 2015 9:59 b 0
Isiin May 11, 2015 (Daljir) — Ciidamo Birmad ah oo tababar kuso qaatay magalada Qardho aya maanta gaaray magalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari si ay uga qayb-qaatan Sugida Amaanka magaladasi,oo mudooyinki danbe ayka dhacayen weeraro ka imayayey dhinaca Ururka Al-Shabaab.
Ciidanka oo gelinki hore Maanta gaaray magalada Boosaso aya waxaa magalada kuwo dhowayey Sarakiil uu horkacayo Taliyaha guud ee ciidanka Booliska Puntland Gen.Maxamed Siciid Jaqanaf.
Gen Jaqanaf ayaa sheegay in ciidamadan tababar xoogan soo qaateen loona baahan yahay in ay ka qayb qaataan sugida amniga magaalada Boosaaso oo weerarada baraha Kantarool iyo saldhigyada ku soo bateen.
Ciidankan ayuu sheegay in si khaas ah loogu soo tababaray ka shaqaynta amniga magalooyinka iyo la tacaalida arrimaha amniga magaalooyinka, wuxuu tilmaamay in ay howl galo kala duwan ka samynayaan xaafadaha magaalada Boosaaso si loo xaqiijiyo Amniga.
Maamulka gobolka Bari aya si diiran uso dhowayey ciidankan ka qayb-qaadanaya sugida Amniga magalada Boosaaso,waxana ciidankan Maanta Boosaaso gaaray kuso beegmaya xili magalada ayka socdan shirar looga hadlayo sidi loo Adkayn laha Amaanka magalada.